Bit By Bit - Mass mmekota - 5.2.3 Mmechi
Human mgbakọ na-enyere gị aka inwe puku nnyocha na-enyere aka.
Human mgbakọ oru ngo ikpokọta ọrụ nke ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ọkachamara na-edozi mfe na ọrụ-big-ọnụ ọgụgụ nsogbu na-adịghị mfe edozi site na kọmputa. Ha na-eji gbawara n'etiti-etinye-ikpokọta atụmatụ na-agbaji nnukwu nsogbu n'ime nza nke dị mfe Micro-aga-eme na ike ga-edozi site ndị na-enweghị pụrụ iche na nkà. Abụọ emana mmadụ mgbakọ usoro na-ejikwa igwe mmụta iji akọwaghị ihe mbọ mmadụ.
Na-elekọta mmadụ nnyocha, ụmụ mmadụ mgbakọ oru ngo na-ihe a ga-eji na ọnọdụ ebe na-eme nnyocha chọrọ were, koodu, ma ọ bụ labeelu oyiyi, video, ma ọ bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Ndị a classifications na-adịghị akwụsị; ha bụ ndị ngwaọrụ maka nnyocha. Dị ka ihe atụ, ìgwè mmadụ ahụ-nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị manifestos a pụrụ iji nwalee nchepụta echiche banyere Ọnọdụ nke anya n'ebe Mbugharị.
Iji nwetakwuo iru gị nsinammuo, Isiokwu 5.1-enye ndị ọzọ ihe atụ nke otú ụmụ mmadụ mgbakọ e ji mee ihe na-elekọta mmadụ nnyocha. Nke a table-egosi na, n'adịghị Galaxy Zoo, ọtụtụ ndị ọzọ na ụmụ mmadụ mgbakọ oru ngo-eji Micro-ọrụ na ọrụ ahịa (eg, Amazon Mechanical Turk). M ga-alaghachi a nke iso na-akpali mgbe m enye ndụmọdụ banyere eke gị onwe gị uka mmekota oru ngo.
Isiokwu 5.1: Ihe Nlereanya nke mmadụ mgbakọ ọrụ na-elekọta mmadụ nnyocha.
nzuzo party manifestos ederede Micro-ọrụ ọrụ ahịa Benoit et al. (2015)
wepụ ihe omume ọmụma si ozi ọma n'isiokwu na ogide Ngagharị iwe na 200 US obodo ederede Micro-ọrụ ọrụ ahịa Adams (2014)
nhazi ọkwa nke akwụkwọ akụkọ isiokwu ederede Micro-ọrụ ọrụ ahịa Budak, Goel, and Rao (2016)
adịrị omume ọmụma si diaries nke agha na-alụ Agha Ụwa 1 ederede afọ ofufo Grayson (2016)
ịchọpụta mgbanwe map oyiyi Micro-ọrụ ọrụ ahịa Soeller et al. (2016)
N'ikpeazụ, ihe atụ ndị na nkebi nke a na-egosi na mmadụ mgbakọ nwere ike inwe a democratizing mmetụta na sayensị. Cheta, na Schawinski na Lintott ndị gụsịrị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ mgbe ha malitere Galaxy Zoo. Tupu dijitalụ afọ, a oru ngo ịgụnye a nde galaxy nhazi ọkwa a gaara achọ nke ukwuu oge na ego na ya gaara na kemgbe bara uru n'ihi na mma-kwụrụ ụgwọ na-enwe ndidi professors. Nke ahụ bụ agaghịkwa ezi. Human mgbakọ oru ngo ikpokọta ọrụ nke ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ọkachamara na-edozi mfe na ọrụ-big-ọnụ ọgụgụ nsogbu. Next, m ga-egosi gị na uka mmekota nwekwara ike a n'ọrụ nsogbu nke na-achọ nka, nka ka ọbuná na-eme nchọpụta onwe ya nwere ike ọ gaghị enwe.